Fikarohana momba ny firaisana Raharaha Reincarnation an'ny mpanoratra "Lohasaha mangina" Rachel Carson | Greta Thunberg: Mpikatroka iray amin'ny tontolo iainana eran-tany roa - Fikarohana Reincarnation
Greta Thunberg: Mpikatroka mafàna fo amin'ny tontolo iainana
Greta Thunberg dia teraka tany 2003 tany Soeda ary lasa mpisolovava tanora iraisam-pirenena izy ho antony mahatonga ny ady amin'ny fiovan'ny toetr'andro.
Noho ny fitiavany ny antony ara-tontolo iainana amin'ny vanim-potoana fahatanorana toy izany, dia voajanahary ny hanontany tena hoe iza no izy taloha.
Taminà andiany iray nifanaovana tamin'i Kevin Ryerson, mpitsangatsangana trance izay niara-niasa tamin'ny 2001 aho dia nanontany aho hoe iza i Greta taloha. Kevin dia nampita fanahy iray antsoina hoe Ahtun Re izay nampiseho ny fahaizana mametraka ny lalao taloha taloha miaraka amin'ny mari-pahaizana avo lenta.
Ahtun Re dia nilaza tamiko, tsy nisalasala, fa i Greta tao anatin'ny fiainana taloha dia i Rachel Carson, ilay mpanoratra Lohataona mangina.
Greta Thunberg ho Reincarnation Rachel Rachelon
Rachel carson dia nanam-pahaizana momba ny biolojika izay boky Lohataona mangina, navoaka tao amin'ny 1962, nandrakitra ny voka-dratsy ratsy ateraky ny simika navoakan'ny tontolo iainana. Izy manokana dia nofaritany ny fomba nanaparitahana ny DDT pestisida mba hifehezana ny moka ka nahatonga ny vorona mankoka DDT. Ireo vorona ireo avy eo dia nametraka atody voaaro sy menaka izay tokony hotsongaina alohan'ny hamavian'ny zana-vavy mba ho matotra tsara.
Raha maty ireo akoho dia tsy nangina ny fotoanan'ny ririnina, satria tsy nisy vorona mihira mba hanambara lohataona. Lohataona mangina dia nomena anarana ho fanombohana ny hetsika ara-tontolo iainana ankehitriny,
Rachel Carson dia teraka tao 1907 ary maty tao 1964, tokony ho 40 taona lasa talohan'ny nahaterahan'i Greta Thunberg.
Fihetseham-batana ara-batana ao amin'ny vatana vaovao: Misy fitovian-javatra eo amin'ny endrik-tarehy i Rachel Carson sy Greta Thunberg. Mahaliana ny mandinika ny fomba fiovan'ny Greta rehefa mandeha ny fotoana.
Raha hijery ny tranga reincarnation izay nandinihana ny fitoviana ara-batana niainany nandritra ny taona 20, azafady, alaivo:
Famokarana zaza, Fitiavana, fahaiza-manao ary fahaiza-manao: Naneho fahakingana sy herim-po i Rachel Carson tamin'ny famoronana hetsika ara-tontolo iainana izay notohizan'i Greta Thunberg ankehitriny.
Fiovam-pirenena: Teraka tany Etazonia i Pennsylvania Carson, raha i Greta Thunberg dia teraka tany Soeda.
Ny fahatakarana fa ny fanahy dia mety hateraka amina fivavahana hafa, firenena na firazanana ara-poko manomboka amin'ny androm-piainany mankany amin'ny iray hafa dia afaka manampy amin'ny famoronana tontolo milamina kokoa satria ny ankamaroan'ny ady sy ny fifandirana dia miankina amin'ny fahasamihafana amin'ireo marika ara-kolontsaina ireo.